Abiy Ahmed: Soomaaliya waa Hal Dal, Hal Qowmiyad oo Hal Diin Leh – VIDEO • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Abiy Ahmed: Soomaaliya waa Hal Dal, Hal Qowmiyad oo Hal Diin Leh – VIDEO
Abiy Ahmed: Soomaaliya waa Hal Dal, Hal Qowmiyad oo Hal Diin Leh – VIDEO
June 16, 2018 - By: Maxamed Cismaan
Raysalwasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa maanta safarkiisii ugu horeeyey ku yimid dalka Soomaaliya iyo caasimada Muqdisho kadib markii uu casumaad ka helay Madaxweynaha Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo.
Abiy Ahmed ayaa aad ugu mahadnaqay madaxda dowlada Soomaaliya ee sida weyn ugu soo dhaweeyey magaalada Muqdisho, xili lagu jiro xuska ciida isagoo sheegay in dalka Soomaaliya uu yahay wadankiisa 2aad.
Labada hogaamiye waxay ku heshiiyeen in sare u qaadaan xiriirkooda iyadoo Dowlada Federaalka ay tahay mida kowaad ee metasha Qaranka iyo Madax-banaanida Dalka Soomaaliya, ayaa lagu yiri qoraalka labada dhinac soo saareen shirkooda kadib.
The leaders agreed to a renewed engagement to intensify relations based on an agreed comprehensive framework which covers, among other things, robust diplomatic relations between Somalia and Ethiopia, with the Federal Republic of Somalia and Federal Democratic Republic of Ethiopia as the primary interlocutors with sovereign authority
Khudbadii Abiy Ahmed
“…Ciid wanaagsan, waan imaaday…” ayuu Abiy Ahmed ku yiri af-Soomaaliga, isagoo sheegay inuu ku faraxsan yahay imaanshihiisa.
“…Halkan umma imaan Taariikhdii hore inaan ka hadlo balse waxaan u imid inaan Mustaqbal iyo iskaashi cusub inaan ka bilowno, qorshaheenu waa sidii Gobalka Bariga Afrika looga dhigi lahaa dhul xasiloon oo horumaray…” ayuu yiri Raysalwasaaraha Itoobiya.
“…Soomaaliya waa dalka kaliya ee Caalamka oo ay degen yihiin Hal Qowmiyad, ku hadla hal Luuqad oo heysta Hal Diin…” ayuu yiri Abiy Ahmed oo sheegay inuu si weyn u taageersan yahay midnimada dalka Soomaaliya.
Waxaan dooneynaa dhiirigelinta Ganacsiga iyo wada shaqeynta labada dal ayuu yiri Abiy Ahmed oo khudbadiisa si weyn diirada ugu saaray arrimaha ganacsiga iyo iskaashiga uu doonayo inuu la yeesho Xukuumada Federaalka Soomaaliya.
“…Mustaqbalka waxaan dooneynaa inaan hal Suuq wada yeelano oo sare u qaadno tayada Ganacsatada Soomaaliyeed iyo Itoobiya….” ayuu yiri Abiy oo sheegay in himiladaasi ay tahay mida danta ugu jirta labada dal oo ah kuwo kala madax banaan balse ay ka dhaxeyso istixgelin iyo iskaashi walaaltinimo.
Arrimaha Argagaxisada ayuu sheegay Abiy Ahmed in labada dal looga baahan yahay inay sameystaan qorshe dheer oo la xariira sidii looga hortagi lahaa argagaxisada balse ay kasii muhiimsan tahay sidii wax looga qaban lahaa daruufaha iyo arrimaha hoose ee keenaya xagjirnimada.
Soomaaliya iyo Itoobiya waxaa ka dhaxeeya Dhiig, Dhaqan, Diin iyo waliba taariikh dheer, walow ay jireen khaladaad horey u dhacay, balse waa kuwo aan horey u muujiney inaan ka gudbi karno oo aan wada dhisan karno taariikh cusub oo wanaagsan, ayuu yiri Abiy Ahmed.
Khudbadii Madaxweyne Farmaajo
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo oo Raysalwasaaraha kusoo dhaweeyey Muqdisho ayaa ku tilmaamay Abiy Ahmed in gurigiisa labaad yahay dalka Soomaliya, isagoo sheegay in labada dal ay ka wada shaqeyn doonaan amniga, ganacsiga iyo iskaashiga & horumarinta.
“…Mustaqbalkeena waa mid isku xiran, waana midaas tan keenaysa inaan wada shaqeyno si looga gudbo caqabada gobalkeena ka jira sida Argagaxisada, si aan dalalkeena ugu horseedno horumar..” ayuu yiri Madaxweyne Farmaajo oo ku baaqay in labada wadan ka wada shaqeeyaan dhanka ganacsiga iyo maalgashiga, sida wadooyinkam dekaddaha iyo Tamarta.
“….Itoobiya waxaa dan ugu jirta degenaanshaha Soomaaliya oo ay si weyn uga faa’iidi doonto iyadoo xiriirka labada dal uu yahay mid taariikhi ah…” ayuu yiri Madaxweynaha Soomaaliya.
Wuxuu sidoo kale Farmaajo ugu mahadnaqay dadaalka iyo isbedalada uu ka wado dalka Itoobiya, isagoo ah hogaamiyaha ugu da’ada yar ee qaarada Afrika.
Arrimaha Madaxda labada dal ay ka wadahadleen ayaa la filayaa inay kamid tahay heshiiskii Dekadda Berbera oo ay shirkada DP World la wareegtay, dowlada Itoobiyana laga siiyey 19% maalgashigaasi ay dadaal weyn ugu jirtay maamulka gooni-u-goosadka ku dhawaaqay ee Somaliland.
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa horey u laalay heshiiskaasi, isla markaana ka mamnuucay shirkadaasi Dp world inay Soomaaliya ka hawlgasho.
Khudbadii Raysalwasaaraha Itoobiya ayaa ka muuqatay inuu ku muujinayo sida dowladiisa uga go’antahay inay iska fogeyso tuhunada ah inay farogashatay arrimaha Midnimada Soomaaliya, balse wuxuu Abiy Ahmed sheegay inuu doonayo in dalka Soomaaliya ay wada shaqeystaan iyagoo midnimadooda iyo madaxbanaanidooda tixgelinaya.
Hadalka Abiy Ahmed ayaa sidoo kale ah fariin ku socota Somaliland oo iyadu rajo weyn ka qabtay Itoobiya inay kaalin ka qaadato Aqoonsi Raadinta maamulkaasi caalamka ka doonayo, xukuumada Addis Ababana ay aqoonsan tahay in dalka Soomaaliya uu yahay “Hal Mid” sida uu khudbadiisa ku sheegay.
Abiy Ahmed ayaa muujinaya inuu doonayo inuu hirgeliyo siyaasad ka duwan tii xukuumada Itoobiya ka dhaxashay Meles Zenawi oo jiheysneyd xiriirka Addis Ababa laleedahay dalalka ay jaarka yihiin sida Soomaaliya, Kenya, Jabuuti iyo Eritereya.
RW.Abiy ayaa sidoo kale ku casumay Madaxweynaha Soomaaliya inuu soo booqdo Addis Ababa.
Dhinaca kale dowlada Soomaaliya ayaan la aqoon qaabka ay u dhigi doonto iskaashiga iyo xiriirka cusub oo ay la yeelaneyso Itoobiyada cusub iyo halka ay kasoo geli doonto heshiiskii muranka badan dhaliyey ee Dekadda Berbera oo kamid ah illihii dhaqaalaha ee Qarankii Soomaaliyeed oo deynmihii lagu halaa weli aan la bixin.
“…Waxay labada dhinac ku heshiiyeen in la qaado caqabada horyaal in la isku xiro labada dal dhinka ganacsiga, horumarinta dekaddaha iyo waliba wadooyinka…” ayaa lagu yiri qoraalkan iyadoo arrintan ay u muuqata mid taabaneysa heshiiskii Dp World ee Berbera.
7.In an effort to attract and retain foreign investment to the two countries and the horn of Africa Region, the leaders agreed on the joint investment in four key sea ports between the two countries, and the construction of the main road networks and arteries that would link Somalia to mainland Ethiopia.
Qoraalka ay sida wadajir ah usoo saareen Labada dhinac ayaa sidoo kale lagu sheegay in hogaamiyayaasha ku heshiiyeen in dib u bilaabaan xiriir cusub oo sare loogu qaadayo xiriirka diblumaasi, isla markaana labada xukuumad ay yihiin kuwa metala labada dal. Waxay sidoo kale ku heshiiyeen in labada dowladood ay furtaan Qunsuliyadihii ay labada dal ku kala lahaayeen.